Kitra Afrikanina: hahemotra amin’ny taona 2022 ny «Can 2021» | NewsMada
Kitra Afrikanina: hahemotra amin’ny taona 2022 ny «Can 2021»
Efa noheverina ny fanapahan-kevitra noraisin’ny kaonfederasiona afrikanina baolina kitra (Caf). Tapaka fa hahemotra amin’ny taona 2022, ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can), tokony hatao amin’ny fiandohan’ny taona 2021.
Tinapaky ny komity mpanatanteraka eo anivon’ny kaonfederasiona afrikanina baolina kitra (Caf), nivory tamin’ny alalan’ny fihaonana ampitain-davitra (visioconférence), omaly talata fa hahemotra herintaona ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can). Fihaonana tokony hotanterahina any Kameronina, ny 9 janoary ka hatramin’ny 6 febroary 2021.
Niarahan’ny rehetra nandray ny fanapahan-kevitra noho ny tsy mbola fahazoana antoka tanteraka, ny mety ho fiafaran’ny valanaretina covid-19, izay hita fa mitombo hatrany amin’izao fotoana izao.
Ankoatra izay, manana olana ihany koa ny Caf eo amin’ny fandaharam-potoana eo amin’ny fiadian-toerana, hiatrehana izany dingana an-tampony amin’ny baolina kitra aty Afrika izany. Raha tsiahivina, mbola misy andro efatra eo tsy tontosa eo amin’ny fifanintsanana. Tsy manana afa-tsy volana roa ihany anefa hanatontosana izany, dia ny oktobra sy ny novambra. Noeritreretina hahemotra enim-bolana izany ka saika hotontosaina, any amin’ny volana mey na jona na jolay amin’ny 2021, saingy ny fanemorana azy herintaona no hitan’ny Caf fa mety indrindra. Miala amin’ny fotoan’ny orana, any an-toerana ihany koa ireo tompon’andraikitra.
Ankoatra izay, tsy te hampifanindry ny fihaonana amin’ny Euro, izay nihemotra amin’ny taona 2022 ihany koa izy ireo.
Fanapahan-kevitra hafa noraisin’ny Caf ihany koa ny hanatontosana ny “Chan”, lalao natokana ho an’ireo mpilalao tsy matihanina, hatao ny volana janoary 2021, tanterahina any Kameronina. Tsiahivina fa tokony ho natao ny volana avrily lasa teo izy ity. Nofoanana ihany koa ny Can, ho an’ny vehivavy ka nosoloina “ligue des champions”. Tsy mbola voafaritra kosa ny firenena hanatontosana izany. Toy izany koa ireo daty hanatanterahana ny fifanintsanana ho an’ny Can 2022.